China N'ogbe egbugbere ọnụ osisi logo logo vegan velvet egbugbere ọnụ onwe labelụ lipstick ala moq etemeete egbugbere ọnụ osisi factory na suppliers | Mma Mma
N'ogbe egbukpo ọnụ ahịa omenala logo vegan velvet egbugbere ọnụ onwe labelụ lipstick ala moq etemeete egbugbere ọnụ osisi
Ọ bụ matte, ezigbo na silky, ihe karịrị 65 shades maka họrọ. Mfe itinye, vegan na obi ọjọọ n'efu.
EXW price: 0.99 ~ 2.99 USD
Egbugbere ọnụ egbugbere ọnụ ga-enwerịrị ihe ọ bụla na ndụ gị kwa ụbọchị, nke nwere ike ime ka ụda anụ gị dị mma. Ekpere egbugbere ọnụ anyị na-enwu gbaa ụfọdụ ederede mmiri, na-ewetara mmetụta akọrọ matte matte, na-eme ka egbugbere ọnụ gị na-egbuke egbuke ma na-agagharị. Onye obula dabaa na udiri akpukpo aru di iche iche na etemeete. Bulie otu ugbu a ma mepụta ịma mma nke gị.
* Nye 65 shades maka nhọrọ gị, zute arịrịọ gị maka agba dị iche iche.
* Tinye agba mara mma n’egbugbere ọnụ gị, na -emepụta etemeete na-adịte aka ma mee ka egbugbere ọnụ gị maa mma.
* Mee ọgaranya na vitamin E na mmiri mmiri, mee ka egbugbere ọnụ gị dị nro ma dị nro.
* Velvet matte elu, jiri mmanụ oliv ma ọ bụ ihapu mmanụ etemeete wepụ.
* Kọmpat size na fechaa imewe, mfe na-ebu na-eji, decorates mma gị n'oge ọ bụla ma ọ bụ n'ebe ọ bụla.
Nkebi Aha Egbugbere ọnụ
5.Nwere vitamin / Shea butter
2.Q: Kedu ka m ga-esi nweta ihe nlele iji lelee ogo gị?
3.Q: you na-anabata OEM ODM na you nwere ike ịme ihe maka anyị?
Azịza: Ee, anyị na-eme OEM ODM ma nyekwa ọrụ imewe yana agba 65 maka ịhọrọ.
4.Q: Ogologo oge ole ka m ga-atụ anya inweta ihe nlele ahụ?
5Ajụjụ: Gini maka oge mbu maka imepụta igwe?
6.Q: Gịnị bụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ gị?
7.Ajụjụ: Otu esi akpọtụrụ anyị?
Ọ ga-amasị anyị inye aka na ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ nzaghachi ị nwere!
Nke gara aga: Gba ọtọ egbugbere ọnụ gloss onwe labelụ ịgba ọtọ glossy lipgloss vegan na obi ọjọọ free ịgba ọtọ egbugbere ọnụ glosses
Osote: Liquid lipstick na egbugbere ọnụ liner setịpụrụ n'ùkwù, ire egbugbere ọnụ liner na egbugbere ọnụ gloss set egbugbere ọnụ kit
hazie egbugbere ọnụ
egbugbere ọnụ dị elu dị elu na-arapara
Egbugbere ọnụ Stick
etemeete egbugbere ọnụ
Matte egbugbere ọnụ osisi onwe labeelu
onwe labelụ egbugbere ọnụ osisi ala moq
velvet egbugbere ọnụ osisi
N'ogbe N'ogbe mkpịsị aka
N'ogbe egbutu osisi omenala logo vegan
Matte egbugbere ọnụ osisi onwe labelụ mebere egbugbere ọnụ ...